युगसम्बाद साप्ताहिक - छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
Thursday, 04.02.2020, 04:49pm (GMT+5.5) Home Contact
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
Saturday, 01.17.2015, 09:53am (GMT+5.5)
आफ्नो अडानमा दृढ रहन सकिएन भने, प्रतिबद्धता अनुसार लगनशील भएर काम गरिएन भने कुनै सफलता हात लाग्दैन । मुलुक हाँक्ने र मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने भन्दै गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुँदा र आफ्नो प्रतिबद्धताबाट मोडिंदाको परिणाम मुलुकले माघ ८ गते मात्र हैन यस्तै पारा रहेमा कहिल्यै पनि संविधानसभाबाट संविधान नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेताहरूको छेपारे बुद्धिले गर्दा एकपछि अर्को संकट मडारिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण मात्र हैन मुठभेडकै स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
संविधान जारी हुने दिन अर्थात् माघ ८ गते आउन ९ मात्र बाँकी छ तर संविधान जारी हुने सम्भावना पटक्कै छैन । नेताहरू संविधानका विवादहरूमा सहमति गर्ने भनेर जति ओथारो बसे पनि सहमतिको चल्ला कोरल्न सकेका छैनन् । आजको बैठकमा सहमति हुन लाग्यो भन्ने नेताहरू भोलिपल्टै नयाँ विवाद सिर्जना गर्छन् या पुरानै अडान दोहोर्याउँछन् । यसले गर्दा आम जनतामा घोर निराशा उत्पन्न भैरहेको छ । कमसेकम आफूले विगतमा गरेको घोषणाको मात्रै पालना गरिदिएको भए पनि अहिले संविधान नबन्ने यतिविधि आशंका हुने थिएन भन्ने जनगुनासो छ । राजनीतिक दलहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने बेलामा नै घोषणापत्रमार्फत संविधानसभा गठन भएको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सोही अनुसार संविधानसभाले कार्यतालिका बनायो । यो कसैले तोकिदिएको समय हैन उनीहरूले नै तोकेका हुन् । दलीय घोषणापत्र अनुसार संविधान लेखन कार्यतालिका बन्यो र निश्चित समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता अहिले देशका राजनीतिक निर्णायक शक्ति हामी नै हौं भन्ने देखाउन र सिद्ध गर्न चाहिरहेका प्रमुख दलका नेताहरूले नै जनाएका थिए ।
तर अहिले सहमति बाहेक अन्य विधि हुँदैहुन्न भन्ने र सहमति नगरे बिधिबाट पनि जारी गरिन्छ भन्ने दुबै पक्ष असफल सावित हुँदैछन् । हिजो सहमति नभए बिधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्छौं भनेर मत माग्नेहरू अब कसरी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँछन् । सहमति किन हुन सकेन ? सहमतिका लागि वास्तविक अबरोध केमा छ र कसले गरिरहेका छ भन्ने सवाल अहिले महत्वपूर्ण रुपमा उठिरहेको छ तर नेताहरूले यसलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसको खास कारण भनेको दलीय स्वार्थ हावी हुनु हो । राजनीतिक दलभन्दा माथि देश छ भन्ने नदेखेकै कारण नेताहरूले देश र जनताको मर्म बुझ्न सकेनन् । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाको बाटोमा राजनीति हिंडिरहेको छैन । ‘एक वर्षभित्र सहमतिका आधारमा नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गरिछोड्ने’ भन्दै गरेको घोषणा अलपत्र परेको छ । नेताहरूमा लोकलाज र लोकभय पटक्कै देखिएन मात्र होइन यो पुस्ताका राजनीतिक दलका नेताहरू पूरै असफलताको दिशातिर उन्मुख छन् ।
नेताहरूको गुम्दो विश्वसनीयताले मुलुक असफलताको दललदमा फस्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । नेताहरू सहमति गर्ने भन्दै भीडन्तको तयारी गरिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको म्याण्डेट पालना गर्न कोही पनि अग्रसर देखिंदैनन् । संविधान जारी गर्ने मिति आउनै लाग्दा विपक्ष देश बन्द गराउँदै हिंड्न थालेको छ भनर बालुवाटारमा सहमतिको नाटक पनि मञ्चन भैरहेको छ । तर संविधानका कुनै पनि विषयमा एक अक्षर लेखिएका छैनन् । अन्तर्वस्तुमा कायम विमतिले चर्को राजनीतिक विवादको रुप लिएको मात्र हैन मुलुकको भविष्य नै संकटमा पर्ने आशंका पैदा भएको छ ।
यतिबेला आएर के कुरा स्पष्ट भएका छ भने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू आफूलाई असफल बनाउने उद्योग चलाइरहेका छन् । जेजस्ता विवादहरू अहिले छन्, ती विवाद ताजा नभएर निकै पुरानो र बासी हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पहिलो संविधानसभादेखि कायम रहेका विवाद अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त मुलुकले संविधान पाउला भन्ने धुमिल हुँदैछ । यति मात्र हैन, चरम राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जनाको भय पनि संगसंगै मडारिएको छ ।
यस्तोमा स्थितिको आँकलनका बीच जुनसुकै विधिबाट भए पनि समयमा संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच समझदारी बन्न सकेन भने नेपाल असफल राष्ट्रको दिशातिर नधकेलिएला भन्न सकिन्न । अहिलेको सबभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही बनेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू हरेकजसो दिन सहमतिका लागि भन्दै बैठकमा बस्ने तर सहमतिको एक बुँदा बाहिर नआउने गर्दा सहमति सहमति भन्दाभन्दै मुलुक डुबाउने प्रपञ्च त रचिंदै छैन भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ ।